10 Talooyin Si Save Money Iyadoo Socdaalka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Talooyin Si Save Money Iyadoo Socdaalka
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 27/11/2020)
Yaa ma jecla si loo badbaadiyo lacag marka ay suurto gal? safrida waxay noqon kartaa mid qaali ah, laakiin by iibsato tigidhka tareenka aad la Save A tareenka iyo qorsheyneysa la inoo yahay caawimaad, idiinka keeno hoos u dhigaan qiimaha. Save the lacag halka la safraya 10 talooyin ku saabsan aad fasax soo socda iyo boorsada jeebka mahadsanid doonaa.
tip 1: Book A Room Iyadoo A Qaboojiye Oo Mikrada A Or Jikada Area
ma Inkastoo dadka qaarkood jeclaan laga yaabaa in wax loo kariyo halka on vacation, cunista kaliya hal cunto maalintii ee 'guriga' aad u badbaadin karin baaldi. Waa maxay sababta aan ku raaxaysan isagoo koob kaafi Cafiyi a caga cusub iyada oo aan lacag adeega qolka waalan ee? Saas ma cuno-in quraacda iyo qadada ka dibna splurge on casho, malana. microwave A iyo qaboojiyaha sidoo kale caawin doonaa reheating hara!
tip 2: Inta aadan Book, Noqo Aware Of Location The Of aad deggan tahay
Gaadiidka si deg deg ah ku dari kartaa ilaa, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad sii joogo meel dhexe. jaale meel in meel fog laga yaabaa in u muuqdaan kuwo ka jaban, laakiin aad macno bixin doonaa, waayo ka dib. Sida habboon, ballansan meel aad ka socon karo meel kasta. Ma aha oo kaliya waxaad ka heli doontaa si aad u aragto more of magaalada aad ku jirtid, laakiin waxa kale oo aad arki doonaa badbaadiyo lacagta halka safraya.
tip 3: Fiiri Wixii City Cards Dalxiiska Si Save Money Iyadoo Socdaalka
Iyadoo ku xiran kaarka, waxaad heli kartaa lacag la'aan ah laga soo galo si ay soo jiidasho ugu sareysa booqdaha, dhimis at maqaayado iyo dukaamada, boodi-the-line fursadaha at mashquul soo jiidashada, gaadiidka dadweynaha oo lacag la'aan ah, iyo xataa DKMG ah oo lacag la'aan ah. Waxay ku xiran tahay faahfaahin, waxaa laga yaabaa in qiimihiisu lacagta.
tip 4: Ha Laysu Room The Best
Waqti intee le'eg yihiin run ahaantii aad u socoto si ay ku qaataan gudaha qolkaaga? Doonaa oo kaliya aad waxaa halkaas hurda? Ma u baahan tahay qol leh a view wanaagsan ama boos dheeraad aad u badan? waxaad isticmaali doontaa waxyaabaha ku, sida barkad ama qol taam ah? Aan daacad, ciidaha kuma saabsana inay caafimaad qabaan! Sidaas ballansan qolkaaga smart iyo lacag badbaadin halka safraya.
tip 5: Bixiya More Time In Places yar, wuuna idin badbaadin doonaa Money Iyadoo Socdaalka
Waxaan jeclahay safarka u gaabiyaa. Dhab ahaantii, si sax ah ... waxaan jeclahay safarka macno leh. Halkii inaan orotonno Waxaana darafkiisan iyo ka dalka in kale, ama iyada oo loo marayo laaca 6 dal ee 6 todobaad, aad u hesho in la ogaado gobolka aad ku sugan tahay, si fiican u. Qaadashada tareen waa habka ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan, sida aad waqti ay qaadato in goobaha oo dhan iyo goobaha sida aad u tagto by. Ka sokow farxad u ah qaadashada fududaynay Quraanka, ballanqaad Duulimaadyo aad u tiro badan, safarada basaska, iyo driving masaafo dheer runtii cuni karaa miisaaniyada. Sidaas hoos, qaataan ka badan, and discover all the cool free stuff.
tip 6: Raac On Media Social
Save lacagta halka ay u safraya "Jeelahay" aad ugu jeceshahay goobaha safarka on Facebook iyo "raac" iyaga Twitter. Waxaa sii caadi ah in shirkadaha safarka u sii daayo heshiisyo kulul si toos ah iyada oo loo marayo channels warbaahinta bulshada ay.
tip 7: Heshiisyada Newsletter
Ka heshiiska in a wargeysyada yar in ay soo saaraan liiska heshiisyo hadda laga heli karaa shabaqa wixii waqtiga la siiyey. Halkan waxaa ku doorashooyin our hadda wargeysyada si loo badbaadiyo lacag halka safraya:
safarka Zoo - Subscribe to warsidaha todobaadle ah oo BILAASH ah ee ay Top 20 heshiisyo - koob ee dalalka kala duwan.
Deal Base - Saxeex ogeysiisyadooda heshiis bilaash ah. Waxay leeyihiin heshiisyo la iibka dacaayadeen iyo bixisaa ma waxaad ka heli doontaa meel kale.
Madaarka Lyon ilaa Tareenka St Moritz
tip 8: Rent Apartment An
Guryaha waa BOMB qoysaska ama kuwa raadinaya meel nool oo dheeraad ah iyo jiko si aad u badbaadin karo on cuntada. Airbnb waa a good way to get low-cost vacation rentals and sublets from locals in 180 dalalka.
tip 9: Safarka In Season Low
Haddii aad leedahay raaxada ah ee ay awoodaan in ay iska ilaali safarka xilli peak, waxaa qabsoomayn! Qiimaha boodi ilaa la taaban karo inta lagu jiro fasaxyada dugsiga. Oo ma ahan oo keliya ka xagaaga waa inaad ka fogaataa - ha iloobin in Easter, Christmas iyo labada bar-dheer fasaxyada sidoo kale waxaa laga yaabaa inay ka badan qaali. Safrida soo baxay xilli ciyaareedkan ka dhignaan doontaa tigidhada tareenka ka jaban iyo dalal yar mashquul - xaaladda guul-guul ah si loo badbaadiyo lacag halka safraya!
mid ka mid ah la soo dhaafay: Raadi Out Free Wi-Fi Si Save Money Iyadoo Socdaalka
Raadi free Wi-Fi Maktabadaha iyo kafateeriyada, si aadan dubbe xogta aad. Oo haddii aad tahay waca guriga si aad u ogaato haddii ay weli waxaa da'ayo, ha ilaawin inaad isticmaasho adeegyada lacag la'aan ah sida Skype ama Google!
Miyaannaan caawi Save Money Iyadoo Socdaalka?
Noo soo sheeg haddii aan ku caawiyey badbaadiyo lacagta halka la safraya 10 talooyin. Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado! Dhanka, Booqashada Save A tareenka si aad u hesho heshiisyo ugu wanaagsan on tigidhada tareenka. No ajuurada Qarsoon, buunbuuninayo ma! Just in Tareenku Safarka!
aad diyaar la kuwanu waa 10 talooyin si loo badbaadiyo lacag halka safraya? Book tigidhada tareenka aad hadda iyo ha naftaada la xaaqay by quruxda safarka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Talooyin Si Save Money Iyadoo Socdaalka” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-save-money-traveling%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
miisaaniyad europetravel moneysavingtips keymoney talooyin tareenka traveltips